Galmudug: Gadood Ciidanka Daraawiishta, Al-shabaab oo Magaalooyin Weeraray iyo Dagaal Beeleedyo – Goobjoog News
Waxaa aad u qasan iminka xaaladda maamul goboleedka bartamaha Soomaaliya ee Galmudug iyada oo todobaadkan iyo dhowwaanba ay ka dhacayeen dhibaatooyin saameeyey dadka iyo deegaanka isla markaana wiiqaya nidaamka maamulka curdinka ah.
Saacadihii tagay, ciidamo ka tirsan Daraawiishta, oo muddo u xareysnaa maamulka Galmudug aya la sheegay iney gadoodeen.
Ciidankan oo 8 bil ay gacanta ku heysay wasaaradda amniga Galmudug, kuna xareysnaa Dhaankaroone o Galinsoor ayaa mar uun go’aan ku gaaray iney oodda jabsadaan.
Weriyaha Goobjoog News ayaa ee gobolka ayaa sheegay in lala xiriirinayo sababo mushaar la’aan ah halka dadka qaar ayba noo sheegeen in ciidamku keliya aaney gadoodin balse isbaaro dhigteen.
Dhanka, kale xalay waxaa la sheegayaa in Al-shabaab ay weerar ku qaadeen Wisil oo ka tirsan Mudug iyo magaalada Ceeldheer oo dhanka Dhuusamareeb ku dhow, inkasta oo uu ahaa ku dhufo, oo ka dhaqaaq hadana cabsi ayey sheegeen iney soo wajahday dadka deegaanka, oo mar walba la kulmo weerrarada kooxda.
Dhibaatooyinka u gaarka ah Galmudug waxaa ka mid ah dagaal beeleedyo iyo aargoosi hore, oo abuuray iney meesha ka baxdo kalsoonida beelaha dhexdooda ah, arrintan ayaa saameysay deegaanno badan oo galbeedka iyo waqooyiga ah sida Balanballe, Hobyo, Bacaadweyne, Holdooyaane iyo meelo kale.